မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်
တစ်ဦးကျောက်မျက်ရတနာပြန်သွားဖို့လိုအပ်ပါသလား? gem.agency ကလွယ်ကူစေသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အခြားအထက်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအဘို့ကြိုးစားကြသည်။ သင့်ရဲ့ကျောက်မျက် (s) ကိုလက်ခံရရှိ 30 ရက်အတွင်းသင်သည်သင်၏အမိန့်နှင့်အတူမကျေနပ်ဖြစ်လာလျှင်သင်မူရင်း & undamaged အခွအေနေကိုပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျောက်မျက်ရတနာသာဒီ 30 နေ့ကစစ်ဆေးရေးကာလအတွင်းပြန်ရောက်လိမ့်မည်။ တစ်ဘို့ GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်း Email ကို ကျေးဇူးပြု. Return Authorization Number (သို့ပွေးလေ၏) နှင့်နောက်ထပ်ပြန်သွားညွှန်ကြားချက်များ။ NB: တစ် RAN မပါဘဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာ၏အမိန့်ငြင်းဆန်ပေးပို့သူမှပြန်လာသောလိမ့်မည်။ သို့ပြန်သွားသည်ထုပ်ပိုးနှင့်ရေကြောင်းအခကြေးငွေပေးပို့သူ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးရောင်းအား (ပြန်လာသောပစ္စည်းများလက်ခံရရှိလျှက်အမိန့်၏နေ့စွဲ၏ 30 ရက်အတွင်း postmarked ရပါမည်) 30 ရက်အကြာမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ စာတိုက်ပေးပို့မငြင်းမပယ် ကျေးဇူးပြု. , သင်ကတင်ပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်, ဒါပေမယ့်အပ်ခဲ့ရှေ့မှာအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်ရန်ဆန္ဒရှိသင့်သည်။ အမိန့်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်လျှင်, ဖောက်သည်ပျောက်ဆုံးလျှင်ပစ္စည်း၏အပြည့်အဝတန်ဖိုးကိုများအတွက်တာဝန်ကိုခံရနှင့်၎င်း၏ပြန်လာအပေါ်သို့မြှုတ်အားလုံးအရစ်ကျစွဲချက်များနှင့်တာဝန်ရကြလိမ့်မည်။ ထားအမိန့်သည်အပိုဆောင်းပြန်ကြားရေး အပြင်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု: နိုင်ငံအများအပြား၌, တင်ပို့ရောင်းချမှုသက်ဆိုင်သောအကောက်ခွန်ကြေးနှင့်အခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်လက်အကြွေးမဆိုအကောက်ခွန်, အခွန်နှင့်လုပ်ငန်းတာဝန်များအဘို့အတာဝန်ရှိသည်။ ကြောင့်ဖျောပွထားပြန်ခွင့်ပြုချက်မရပါ။ ** အားလုံးပြန်အမ်းငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိကဲ့သို့တူညီသောနည်းလမ်းကနေတဆင့်လုပ်နေကြတယ်။ သင်္ဘောတင်ခ, အာမခံနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကုန်ကျစရိတ်သည် non-အမ်းဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမ restocking အခကြေးငွေရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအစားထိုးပူဇော်ကြ၏။ ပိုများသောမေးခွန်းလွှာ? ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေပေးငွေယူဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်လုံခြုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုလုံခြုံကြောင်းကြောင်းအာမခံပါသည်။
GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းက၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလေးစားပါသည်။ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာအီးမေးလျသို့မဟုတ်အမိန့်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ယာယီအသုံးပြုရပေမည်။
GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်လှည်းကို enable browser ကို cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ အဘယ်သူမျှမပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို cookies များကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးဝင်ရောက်ဖို့ဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုပြီးမေးခွန်းများ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
သင်သည်သင်၏လှည်းတစ်ခု item ကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါသင်ကလက်မှတ်အမိန့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, link ကို click နှိပ်ပြီး "ဒီအရာအတွက်ကျောက်မျက်လက်မှတ် add" အထက်ပါပစ္စည်းအသေးစိတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် "စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်" ခလုတ်ကို။ ဒါကလက်မှတ်ရွေးချယ်စရာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးပစ္စည်းများကိုအာမခံနေကြတယ် GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ။ ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အမြဲသင်တို့အဘို့အပေးဆောင်ရကြောင်းအာမခံပါသည်။
GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းမှာအားလုံးကျောက်မျက်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်အာမခံချက်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူန်ထမ်းဂရုတစိုက်အသီးအသီးကျောက်မျက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်တိုင်းတာ။
GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းကနေတိုင်းကျောက်မျက်ကမ္ဘာမြေအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသဘာဝကျောက်မျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒြပ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်း-created "ကျောက်မျက်" တွင်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါဘူး။
စစ်ဆေးခြင်း-ထဲက, ဘေးကင်းလုံခြုံလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူလွယ်ကူသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အမိန့်ဖြည့်များအတွက်အောက်ပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များကို:
PayPal ကနေတဆင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ပေးဆောင် (မျှ PayPal ကအကောင့်လိုအပ်) PayPal ကဗီဇာ, ဗီဇာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်, ဗီဇာ Electron, Master Card, Eurocard, Maestro နှင့် American Express ကလက်ခံခဲ့သည်။ PayPal ကလုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်.
သင်၏ PayPal အကောင့်နဲ့ပေးဆောင် ကျနော်တို့ကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု PayPal ကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါပြီ။ မှတ်စု: သငျသညျ account တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်, သင်အလွယ်တကူ on-screen ကိုလမ်းညွန်အောက်ပါဖြင့်အကောင့်သစ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
Western Union လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ပေးဆောင် Western Union လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ပေးဆောင်ရတဲ့အခါ, သင့်ပစ္စည်းများသုံးနေ့ရက်ကာလအဘို့သိုထားကြလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့လွှဲပြောင်းဘို့ကိုထူးခြားတဲ့ပိုက်ဆံငွေပေးငွေယူအရေအတွက် (MTN #) အီးမေးလ်ပို့ပါ။ ထိုရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ငါတို့သည်သင်တို့၏အမိန့်ကို process ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်စု: လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိကြောင်းငွေပမာဏမှနုတ်ယူမရရမည်ဖြစ်သည်။
တိုက်ရိုက်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပေးဆောင် တိုက်ရိုက်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပေးဆောင်ရတဲ့အခါ, သင့်ပစ္စည်းများသုံးနေ့ရက်ကာလအဘို့သိုထားကြလိမ့်မည်။ သငျသညျငွေပေးချေမှုအစပျိုးခဲ့ကြတခါကိုဘဏ်ငွေလွှဲရည်ညွှန်း code ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ထိုရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပြီးတာနဲ့ငါတို့သည်သင်တို့၏အမိန့်ကို process ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်စု: လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိကြောင်းငွေပမာဏမှနုတ်ယူမရရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့စျေးဝယ်လှည်းပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်သင့်ရေကြောင်းနည်းလမ်းကိုရွေးပါ။ ကျနော်တို့ကအောက်ပါနှစ်ခုရေကြောင်းနည်းလမ်းများနှင့်နှုန်းထားများဆက်ကပ်; EMS (3-4 ရက်) စံ Worldwide မှနိုင်ငံတကာလကွောငျးစာပို့ (10-21 ရက်)
သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအားရွေးချယ်ပါနှင့် "ယခုပေးဆောင်" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ငွေတောင်းခံသတင်းအချက်အလက် Enter, ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းဘို့ on-screen ကိုညွှန်ကြားချက် print ထုတ်။ သင့်ရဲ့အမိန့်ကိုအောင်မြင်စွာထားရှိထားပြီးပြီးတာနဲ့, သင်မှာကျွန်တော်တို့ဆီကအီးမေးလ်တစောင်အတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ် [အီးမေးလျ protected] မှတ်စု: "add ရန်သေချာစေပါ ကျေးဇူးပြု.[အီးမေးလျ protected]သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှမဆိုအီးမေးကိုမခံမထားဘူးဆိုရင် "သင်တို့သည်ငါတို့၏ရေကြောင်းနှင့်အမိန့်ကိုအတည်ပြုတဲ့အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရယူနိုငျကွောငျးကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာလုံခြုံအီးမေးလ်အဆက်အသွယ်သင့်ရဲ့စာရင်း။ , သင့်ကို spam သို့မဟုတ် Junk အီးမေးလ် folder ကိုစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါပါ။ ငွေကြေး ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ PayPal ကငွေပေးချေမှုသာအမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်စွဲချက်တင်ခံရလိမ့်မည်။ Western Union မှတဆင့်သို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေမှသာအမေရိကန်ဒေါ်လာပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်အခြားတစ်ဦးငွေကြေးကိုရွေးချယ်ခြင်းသောအခါ, လက်ရှိနေ့အဘို့ငွေလဲနှုန်းပြစျေးနှုန်းများပြောင်းလဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ PayPal ကနှင့်သင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ဘဏ် (ဘဏ်ထုတ်ပေးခရက်ဒစ်ကဒ်) ထိုကြောင့်, သင်ရွေးချယ်ထားသောငွေကြေးကိုအတွက်စွဲချက်အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ကြောင်းငွေကြေးမှာပြထားတဲ့စျေးနှုန်းများအနေဖြင့်ကွာခြားမည်ဟုငွေကြေးပြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လဲလှယ်မှုနှုန်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းမှသာအမေရိကန်ဒေါ်လာမှာပြထားတဲ့ငွေပမာဏအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။ မဆိုအပိုဆောင်းကြေးသီးသန့် PayPal ကန့်, သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပေးဘဏ်၏သို့မဟုတ် Western Union ၏မူဝါဒများအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောင်္တင် Options ကိုများအတွက်အောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ ကျေးဇူးပြု. : ဖနွမ်းပင် & စီရမ်ရိရိ, ကမ္ဘောဒီးယားမှအခမဲ့ပို့ဆောင်မှု
သင်္ဘောဖော်ပြ - အမေရိကန်ဒေါ်လာ 35
Express ကိုတင်ပို့ရောင်းချမှုပုံမှန်အားဖြင့်ပေးပို့ဘို့ 3-4 ရက်ပတ်လုံးယူနှင့်အွန်လိုင်းလမ်းတိုင်းခြေလှမ်းခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ ချောထုပ်အပြည့်အဝအာမခံဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကလက်မှတ်ပေးအပ်ခြင်းအပျေါ၌လိုအပ်ပါသည်။ ပေးပို့အများဆုံးနိုင်ငံများအတွက်သောကြာနေ့မှတနင်္လာဖြစ်ကြ၏။ (ယူအေအီး, ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ကူဝိတ် မှလွဲ. ) ဘယ်သူမျှမကစာတိုက်သေတ္တာများ, APO သို့မဟုတ် FPO လိပ်စာများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မှတ်စု: သင်တစ်ဦး '' ဖိုင်ပေါ်တွင်လက်မှတ် '' ရှိပါက, ဒီခွင့်ပြုချက်ပြန်ရုပ်သိမ်း EMS ခေါ်ပါ။ တစ်ဦး '' ဖိုင်ပေါ်တွင်လက်မှတ် '' ကြောင့်တစ်ဦးလက်မှတ်မပါဘဲကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ကြောင်း packages ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံတင်သင်္ဘောဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အသုံးပြုနိုင်မှု '' ရရှိနိုင်ပါ '' အဖြစ်ပြသအားလုံးကျောက်မျက်စတော့ရှယ်ယာနှင့်ချက်ချင်းသင်္ဘောများအတွက်အဆင်သင့်ရှိကြ၏။ အမိန့်တနင်္လာနေ့အလုပ်လုပ်နေ့က 1 အတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ကြသည် - သောကြာနေ့ (ခမာအားလပ်ရက်ဖယ်ထုတ်ပြီး) ။ က Non-USA သို့တင်ပို့ရောင်းချမှုများအတွက်အပိုဆောင်းပြန်ကြားရေး နိုင်ငံအများအပြား (မ USA) ခုနှစ်တွင်စနစ်တကျတင်ပို့ရောင်းချမှုအကောက်ခွန်စွဲချက်နှင့်အခွန်မှဘာသာရပ်များမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောမေးလ်ပိုရှည်ကြာပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်အပိုဆောင်းကြေးရှောင်နေကြတယ်။ ကျနော်တို့ EMS အားဖြင့်တင်ပို့ပျော်ရွှင်သော်လည်း, ငါတို့သည်သင်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါအပိုစွဲချက်မထိန်းချုပ်ရှိသည်သောမှတ်သားပါ။ မှတ်စု: သွင်းကုန်အခွန်သို့မဟုတ်တာဝန်ဝယ်မယ့်တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုကဲ့သို့သောစွဲချက်၏ငြင်းဆန်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းပြန်လာသောတင်ပို့ရောင်းချမှုကိုလက်ခံလို့မရပါ။ သငျသညျမဆိုအထူးအစီအမံလိုအပ်လျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ ငွေတောင်းခံလွှာ GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းကနေအားလုံး packages များတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံငွေတောင်းခံလွှာများပါဝင်သည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင့်ရဲ့အမိန့်အားမရရှေ့မှာသင့်တဲ့စိတ်ကြိုက်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်မှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမငွေတောင်းခံလွှာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်။
ကျောက်မျက်ရတနာဂမ်အခါ, GEMIC ဓာတ်ခွဲခန်းအောက်ပါရှင်းလင်းပြတ်သားစကေးကိုအသုံးပြုသည်: IF : Loupe clean - ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော; ပါဝင်နိုင်၏အခမဲ့ဖြစ်သည်။ VVS : -; သိပ်ကိုအနည်းငယ်ပါဝင်နိုင်နီးပါးစင်ကြယ်သော loupe အနိုင်နိုင် 10x ချဲ့အောက်၌ငါမြင်ရသောပါဝင်နိုင်။ VS : မျက်စိသန့်ရှင်းတဲ့ - အလွန်အနည်းငယ်ပါဝင်နိုင်; အနည်းငယ်ပါဝင်နိုင်သည့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမျက်စိဖြင့်သို့မဟုတ် 10x ချဲ့အောက်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ SI : အနည်းငယ်ပါဝင်သည် - သေးငယ်တဲ့ပါဝင်နိုင်သာမန်မျက်စိနှင့်မြင်နိုင်ပါသည်။ I : ပါဝငျ - ပါဝင်နိုင်သာမန်မျက်စိနှင့်မြင်နိုင်ပါသည်။